Onollo: Maaraynta Warbaahinta Bulshada ee Ecommerce | Martech Zone
Shirkadaydu waxay ka caawinaysay macmiil yar hirgelinta iyo ballaarinta Soo iibso dadaalka suuqgeynta dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Sababtoo ah Shopify waxay ku leedahay suuq-geyn aad u weyn warshadaha e-commerce, waxaad ogaan doontaa inay jiraan tan badan oo is-dhexgal ah oo la soo saaray oo nolosha u fududeeya kuwa wax iibiya.
Iibka ganacsiga bulshada Mareykanka ayaa kori doona in ka badan 35% si uu u dhaafo $ 36 bilyan sanadka 2021.
Koritaanka ganacsiga bulshadu waa isku -darka nidaamyada gaadhi -isku -dhafan oo aaladaha warbaahinta bulshada ay is -dhexgalinayaan iyo sidoo kale dabeecadaha iibsadaha oo si weyn isu beddelaya sannadkii la soo dhaafay. Iyadoo taas maskaxda lagu hayo, shirkadaha e-commerce ayaa laga yaabaa inay rabaan inay wadaagaan oo kor u qaadaan badeecadooda iyo ololahooda si sahlan. Nidaamyada maareynta warbaahinta bulshada inta badan isma dhexgalaan si ay ula socdaan oo ula socdaan alaabtaada iyo iibintaada warbaahinta bulshada… ilaa hadda.
Onollo: Jadwalka iyo tayaynta Boostooyinka Ganacsiga Bulshada
Waa kan fiidiyaha guud ee weyn:
Onollo waxay bixisaa madal maareyn maareyn warbaahin bulsheed oo isku dhafan baahiyahaaga e-commerce, oo ay ku jiraan:
Isdhexgalka Ecommerce - Isku -darka wax -soo -saarka leh Soo iibso, Magento, WooCommerce, Iyo Bigcommerce.
Dhajinta alaabta - Gelitaan, tafatir, oo daabac xogta xogta alaabtaada oo dhowr guji. Onollo wuxuu ka soo saaraa xogta badeecada dukaankaaga hal guji. Waxaad abuuri kartaa dhajinta wax soo saarka warbaahinta bulshada adigoon daalin sawirrada daallan, nuqul-dhajinta magacyada alaabta, sharraxaadda, qiimaha, URL-yada, iyo wixii la mid ah. Baabuur dabiici ah ku kaxee lacag la'aan. U sheeg adduunka waxaad iibiso.
Kalandarka Bulshada - Abuur dhajinta warbaahinta bulshada nooc kasta ha ahaadee adiga oo adeegsanaya xogta alaabta ee bakhaarkaaga. Jadwal u samee oo la soco dhammaan dhejimahaaga warbaahinta bulshada jadwalka Onollo.
Jadwalka Smart - Algorithm -ka lahaanshaha lahaanshaha ee Onollo wuxuu ku taliyaa waqtiga ugu habboon boostadaada xigta. Ma sii maleyn. Warbaahinta bulshada waa inay ahaato mid sahlan.
Autopilot (Muuqaalka Sixirka) - Sii wad dhejinta inta aad nasanayso. Autopilot ayaa dooran doonta oo daabici doonta waxyaabaha ku habboon waqtiga ku habboon dhammaan shabakadahaaga warbaahinta bulshada.
Saxiix Koonto Onollo oo Bilaash ah
Tags: AmazonBigCommerceArbacada ahFacebookgoogleLinkedInmagentoonolloPinterestdukaankawarbaahinta bulshadawarbaahinta bulshada autopostkalandarka warbaahinta bulshadamaareynta warbaahinta bulshadajadwalka warbaahinta bulshadaTikTokTwitterjeclaanwixwoocommerce